FatherLand :: Listforsale
Tel: 02-32830, 09-5036485, 0--7314700.
Previous Next အမှတ် - (၅၉/၆၁) ၊ ရှမ်းလမ်း (ဗဟိုလမ်း) စမ်းချောင်းမြို့ နယ်။
1. (၈) ထပ် (Penthouse) ပါ
2. ဓါတ်လှေကား (၁) စင်း 24 Hour Services
6. Auto ရေတင်စနစ်
7. မီးဖိုခုံ (5' x 2.5' x 20" )
8. ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ ကြွေပြားခင်းပြီး ၊ နံရံ (4') အမြင့် ကြွေပြားကပ်ပြီး
9. နံရံ၊ ဆေးပါဝင်ပြီး
1.အမှတ်(၂၄)၊ မကြီးကြီးလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ 2. အမှတ်(၁၁/၁၂)၊ မင်းနန္ဒာလမ်း ၊ ဒေါပုံမြို့ နယ်။ 3. အမှတ်(၃၂)၊ ဓမ္မာရုံလမ်း၊ လှိုင်မြို့ နယ်။ 4. အမှတ်(၂/၄/6)(၁၁/၁၃)၊ ဗညားဒလလမ်းနှင့်မြရာကုန်းလမ်းထောင့်၊ ဘောက်ထော်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့ နယ်။ 5. အမှတ်(၂၇၆/ဘီ) ၊ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ တာမွေမြို့ နယ်။
6. အမှတ်(၅၇)၊ ရှမ်းကုန်းလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ 7. အမှတ်(၅၉/၆၁) ၊ ရှမ်းလမ်း(ဗဟိုလမ်း)၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်။
8. အမှတ်(၅၇)၊ ပြည်သာယာလမ်း၊ ဘောက်ထော်မြို့နယ်။ 9. အမှတ်(၅၁)၊ ဗိုလ်ရာညွန့်လမ်းသွယ်၊ ဒဂုံမြို့ နယ်။ 10. အမှတ်(၂၁၈)၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့ နယ်။ 11. အမှတ်(၄၀/၄၂)၊ ဘုန်းကြီးလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့ နယ်။
12. အမှတ်(၁၅၀/၁၅၂)၊ ဗညားဒလလမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့ နယ်။ 13. အမှတ်(၃၈၀)၊ ဗညားဒလလမ်း ၊ တာမွေမြို့ နယ်။
14. အမှတ်(၃၀)၊ ယောမင်းကြီးလမ်း၊ ဒဂုံမြို့ နယ်။ 15. အမှတ်(၁၀၄)၊ ၉၄လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့ နယ်။ 16. မြေကွက်(ရန်ကုန်+သန်လျင်)။ 17. အမှတ်(၃၈)(၂၃)လမ်း ၊(၈၁ x ၈၂)လမ်းကြား ၊ အောင်မြေသာဇံမြို့ နယ် ၊ မန္တလေးမြို့ ။ 18. မြေကွက်(မန္တလေး+ပြင်ဦးလွင်)။ 19. ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း(အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး) 20. မြေနှင့်အဆောက်အအုံ21. အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး(ဖုန်းငှားမည်)။ Previous Next 2010 © copy right by FATHER LAND.